Fitaovana laboratoara - Fitaovana laboratoara ho an'ny biolojia - mpamatsy fitaovana amin'ny laboratoara - BALLYA
Fitaovana laboratoara ho an'ny fikarohana sy famokarana siantifika
A heater fanafanana manome loharanom-pahamendrehana mazava tsara ho an'ny fomba fandalinana maro saro-pady.
The mpamaky azo entina dia natao manokana ho an'ny andiam-pitsapana antibiotika sy mycotoxin.
Fanafanana ny tsiranoka amin'ny biby
Mampiasa ny fifanakalozana hafanana maina, ny ra ary Fanafanana ranoka haingana mitondra ny haavon'ny mari-pana ny tsiranoka hatramin'ny an'ny marary.
Grinder hozatra dia mety amin'ny fikolokoloana sy fanorotoroana santionany kely isan-karazany.
Trano fanaovana santionany ho an'ny fitsapana fitiliana faobe covid-19
Inona avy ireo fitaovana laboratoara?
Ny fitaovana laboratoara siantifika dia manondro fitaovana sy fitaovana isan-karazany ampiasain'ny matihanina na mpianatra miasa ao amin'ny laboratoara.
Fitaovana laboratoara sy ny fampiasan'izy ireo
Metatra asidra: refesio ny sandan'ny PH.
Meteram-pitantanana: refesina ny lanjan'ny fitaritana ny vahaolana electrolyte.
Titrator fametrahana azy ho azy: titration asidra-base, titration redox, titration rotsakorana, titration be pitsiny.
Titrator fijanonana maharitra: fitaovana ho an'ny titration araky ny famantarana ny fiovana mety hitranga.
Karl Fischer Analyzer Moisture: mandrefy ny atin'ny hamandoana vokatra.
Chromatography entona sy gazy
Gas chromatograph: famakafakana kalitao sy habetsahana
Chromatograph Liquid: famakafakana kalitao sy habetsahana
Santionany mikraoba: ampiasaina amin'ny famakafakana chromatography ranon-javatra sy gazy
Mpamokatra entona: fitaovana fototra
Fatana muffle, lafaoro hafanana ambony: fanomanana santionany
SPE Workstation: ampiasaina amin'ny fitrandrahana matanjaka sy fanadiovana ny residu pestiside, ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa na ny santionany amin'ny famoronana fanafody. Ireo santionany namboarina dia azo zahana mivantana amin'ny dingana ranoka
Derivatisation aorian'ny tsanganana: fanomanana santionany chromatographic
Photometric sy chromaticity
Spektrofotometra hita maso Ultraviolet: mandrefy ny habetsaky ny tsindrona ireo zavatra azo avy amin'ny tara-pahazavana hafainganam-pandrefesana, famakafakana be loatra
Spektrofotometra hita maso: mandrefy ny mari-pahaizana amin'ny fitanana ny otrikaina amin'ny taratra monochromatic an'ny halavan'ny halavany, ny famakafakana isa.
Spektrofotometra fanamafisana atomika: manisa ny fitrandrahana taratra mampiavaka araka ny atôma ambanin'ny tany an'ny singa refesina
Colorimeter: refesina ny fahasamihafan'ny chromaticity sy ny lokon'ny fanafody
Fanodinana optika, famerenam-bidy
Polarimeter (auto-mijery auto): refesina ny fihodinan'ny otrikaina ny zavatra, hamakafaka ny fifantohana, ny fahadiovana ary ny atin'ny siramamy ao amin'ilay akora
Metera siramamy tanana: refesina ny atin'ny siramamy sy ny atin'ny siramamy ao anaty vahaolana
Ny boaty hafanana sy hamandoana tsy tapaka: ampiasaina amin'ny fanandramana fitoniana zava-mahadomelina
Fanamafisam-peo karbôna: sela, sela, kolontsaina bakteria
Lafaoro fanamainana vacuum: fanamainana vovoka, fanaova-mofo sy famonoana otrikaretina ary fanamafisana ny kaontenera fitaratra isan-karazany
Fanamafisana biokimika ambany mari-pana: karazan-tahiry, kolontsaina biolojika, sns.
Lafaoro marina: fanafanana sy fanasitranana akora, fanafody tsy manara-penitra, fanafody raokandro sinoa, plastera, vovoka, granules, granules, pilina rano, tavoahangy fonosana sns, fanamainana sy tsy fahampiana rano
Boaty Hybridization: dingana hybridization
Fitaovana laboratoara fototra
Fanadiovan-drano Ultra: manao rano madio madio
Milina osmosis rano madio: TOC sandan'ny fidirana rano sy fampidirana ny rafitra rano ultrapure, fanamarinana fanadiovana: fiarovana ny tontolo iainana ny ozinina fanafody
Masinina fanadiovana sy famonoana otrikaretina: fanadiovana mandeha ho azy, famonoana otrikaina, fanala vita amin'ny vera amin'ny laboratoara (kilasy indostrialy laboratoara)
Centrifuge: fisarahana santionany, sedimentation sns.
Sterilizer: famonoana otrikaretina ireo zavatra andrana
Rafitra fanaraha-maso fandroana rano / thermostatic: manome hafanana tsy tapaka ho an'ny fanandramana
Fanaparitahana sela: fanodinana santionany biolojika
Takelaka fanafanana: fiasan'ny fanafanana
Mpanetsika andriamby: famporisihana santionany mahazatra
Oscillator, fihovotrovotra kely: oscillation santionany
Fanadio ultrasonika: fanasana tavoahangy reagent, fitrandrahana fanafody sinoa, sns.
Pipette: volavola kely ~ fantsom-peo lehibe
Mixer thermiostatique, debugger template, rafitra suction: fanodinana santionany biolojika
Mpangaro mixer mekanika biolojika: Eo ambanin'ny fiheverana fa tsy manimba ny asan'ny santionany biolojika, mifangaro ireo santionany i Dachengdu
Mikraoskaopy biolojika: mandinika zavatra madinidinika
Fitaovana laboratoara ho an'ny biolojia
Voalohany, tokony hazava fa ny laboratoara biolojika dia samy manana ny fifantohany sy ny fanasokajiana azy, toy ny laboratoara mikraoba, sela biolojika sela, laboratoara biolozika molekiola ary laboratoara kolontsaina. Araka ny laboratoara biolojika samihafa, ny fitaovan'ny laboratoara fampiasa matetika dia hafa ihany koa.
Fitaovana laboratoara fampiasa matetika ao amin'ny laboratoara microbiology dia:
Fanamafisana ny mari-pana tsy tapaka, incubator bobongolo, incubator biokimika, workbench tena madio, autoclave, lafaoro, takelaka fanafanana, lafaoro elektrika, fifandanjana an-tsokosoko elektronika, mpanetsika andriamby, fandroana rano, shaker, Centrifuge, boaty cryopreservation, pipette, PH metre, spectrophotometer, optique mikraoskaopy, mikraoskaopy scanner, homogenizer, sns.
Fitaovana laboratoara fampiasa matetika amin'ny biolojika molekiola sy laboratoara biolojia sela dia:
Fanamafisam-peo karbônika, kabinetra fiarovana voajanahary, boaty fitahirizana maripana ambany, lafaoro, autoclave, fifandanjana an-tsokosoko, fifandanjana mahazatra, pipette, centrifuge, mikraoskaopy mihodina, fitaovana PCR, fitaovana elektroforesis, fanamaivanana ny horita, sns.
Fitaovana laboratoara fampiasa matetika ao amin'ny laboratoara kolontsain'ny sela dia:
Autoclave, oven, shaker, incubator maivana, incubator artifisialy clim, fandanjalanjana fandalinana, fifandanjana tsotra, toeram-piasana tena madio, sns.
Raha ny fahitana ny fiasan'ny laboratoara dia mizara ho fitehirizana santionany, fanomanana santionany, fizotran'ny fambolena, fandinihana ary famakafakana. Fitaovana samihafa no takiana amin'ny dingana miasa isan-karazany.
Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana ampiasaina matetika amin'ny fitehirizana santionany dia misy vata fampangatsiahana / vata fampangatsiahana hafanana ambany indrindra sy tanky azota azota. Fitaovana mahazatra amin'ny fanomanana santionany dia misy pipettes, mizana, andiany homogenisation / manetsiketsika, centrifuges, fanamainana mangatsiaka, autoclaves ary fitaovana elektroforesis.
Ny fitaovana ampiasaina matetika amin'ny fizotran'ny fambolena dia misy andian-tsarimihetsika, kabinetra fiarovana azo antoka / toeram-piasana tena madio, fitoeran-drakitra, shaker, fandroana rano, milina fanodinana tavoahangy, fitaovana PCR, mpamaky microplate, sns.
Fitaovana mahazatra ampiasaina amin'ny fandinihana sy ny famakafakana dia ny mikraoskaopy, ny kaonteran'ny zanatany, ny cytometera mikoriana, ny sequenco ADN ary ny andiam-pandromografia.
Ao amin'ny laboratoara biolojika dia azo ampiasaina ihany koa ny fitaovana toy ny mpanasa tavoahangy, andian-drano tsy misy fangarony ary milina fanadiovana ultrasonic.
Fitaovana laboratoara ho an'ny fizika
Ampiasaina matetika amin'ny fitaovana laboratoara ara-batana dia:
(1) Fitaovana fandrefesana sy fitaovana fototra, toy ny mpanapaka metatra, caliper vernier, micrometer, fifandanjana, refin'ny lohataona, metronome, dot timer, thermometer, varingarina fandrefesana, barometra, fampianarana metatra elektrika, ammeter, voltmeter, multimeter, oscilloscope, generator signal , sns.
(2) Fitaovana ankapobeny, toy ny projecteur, milina sarimihetsika, tabilaon'ny fampianarana andriamby, paompy banga, tohana ara-batana, mpanitsy herinaratra, sns.
(3) Fitaovana manokana, toy ny tester Archimedes, Torri deli tester, fitaovana fampifandraisana, pulley sy pulley block, calorimeter, electroscope, motera fampidirana electrostatic, rheostat tariby mihetsiketsika, boaty rheostat, famatsiana herinaratra ambany, Magnets sy fanjaitra, ambaratonga voalohany sy faharoa coil, coil induction, relay, prisma, dabilio optika, lantira, fantsom-pitrandrahana, fantsom-pitaratra, efi-rahona Wilson, sns.
Fitantanana ny fitaovana laboratoara
1. Mametraka rakitra ary fitaovana
Ny laboratoara dia tsy maintsy manangana rakitra isaky ny fitaovana, manangana "rakitra" ary manomana boky kaonty "lisitry ny fitaovana sy ny fitaovana", ho mora azo sy harahina. Ny atiny dia misy: fanamiana isan'ny fitaovana, anaran'ny fitaovana, maodely, tondro ara-teknika (isan-karazany, marina, sns.), Mpanamboatra, nomeraon'ny orinasa sy daty, fotoana fividianana, toetran'ny fampisehoana, fanamarinana na tsipika fanamarinana (taratasy fanamarinana), toerana fikojakojana, fampiasana na ny mpiambina, ny toerana misy azy ankehitriny, sns., hahatratra milina iray sy fisie iray.
2. Hamarino tsara ny fiasan'ny fitaovana mahazatra
Ilaina ny manara-penitra ny fomba fiasa momba ny fitaovana sy ny fitaovana, ary ny fitaovana fitiliana ny laboratoara tsirairay dia tokony hanomana "torolàlana momba ny asa"; mampihatra fanaraha-maso ny tontolo iainana amin'ireo fitaovana sy fitaovana, mametraka ny fisoratana anarana sy ny mari-pahaizana momba ny fanaraha-maso ny mari-pana ary ny hamandoana, ary mahita lesoka ara-potoana mba hanafoanana ny lesoka ary hanao ny fitaovana Ny fibaikoana ireo fitaovana dia voafehy foana ary mandeha ara-dalàna.
3. Fanamarinana mandritra ny fampiharana ireo fitaovana sy fitaovana
Ho an'ny fitaovana misy fampiasa matetika, ny masontsivana izay mora mihetsiketsika, matetika nesorina, naterina ary nentina tany amin'ilay tranokala hanaovana andrana, dia tokony hodinihina ny fizahana mandritra ny vanim-potoana fandaminana rehefa mety. Mandritra ny fampiharana, ny fanamarinana dia tsy mitovy amin'ny kalibration. Ny calibration dia ny manamarina sy manitsy ny fahombiazan'ny fitaovana eo anelanelan'ny calibrations roa. Ny calibration dia mamaha ny "quasi-inururacy" amin'ny fitaovana; raha ny fanamarinana ny fitaovana mandritra ny fampiharana ny fitaovana kosa dia mamaha ny "fitoniana" amin'ny olan'ny fitaovana.
4. Tokony ho tantanana ny mariky ny fitaovan'ny laboratoara
Ampiharo ny fitantanana marika ho an'ny fitaovana sy ny fitaovana, amin'ny fampiasana famantarana maitso, mavo ary mena, ary fitaovana sy fitaovana mandeha amin'ny fanamarinana na fanitsiana mampiasa marika maitso (ho an'ny normal na grid); raha ny fahamendrehan'ny fitaovana sy fitaovana sasany dia tsy mendrika, fa ampiasaina amin'ny fitsapana Rehefa mendrika na simba ny faritra sasany dia ampiasaina ny marika mavo; ireo fitaovana sy fitaovana simba na tsy mendrika dia mampiasa ny mari-pahaizana deactivation.
Mpamatsy fitaovana 20 ambony indrindra eto an-tany
1. Thermo Fisher Scientific (Etazonia)
2. Shimadzu (Japon)
3. Roche Diagnostics (Soisa)
5. Danaher (Etazonia)
6. Zeiss Group (Alemana)
7. Bruker (Etazonia)
8. Mettler-Toledo International (Soisa)
9. Waters Corp (Etazonia)
11. Laboratoara Bio-Rad (Etazonia)
12. Eppendorf (Alemana)
13. Spectris (Angletera)
14. JEOL (Japon)
15. Hitachi High-Technologies (Japon)
16. Nikon (Japon)
17. Illumina (Etazonia)
18. Sartorius (Alemana)
19. Olympus (Japon)
20. Tecan (Soisa)